Thu, Jun 4, 2020 at 9:46pm
काठमाडौँ, १२ भदौ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला, दलितलगायत आवाज विहीनको आवाजलाई सञ्चारका माध्यमद्वारा उजार गर्न अपिल गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, महिला समितिद्वारा आज यहाँ आयाेिजत ‘महिला नेतृत्व र सञ्चार’ विषयक अन्तक्र्रिया तथा तीज विशेष शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्र विकासमा सञ्चार माध्यमको अहम भूमिका हुने बताउनुभयो । मन्त्री थापाले राज्यले महिलाका निम्ति प्रदान गरेको हकअधिकारलाई सञ्चार..
काठमाडौँ, १२ भदौ सन् २०२२ सम्ममा अन्तरिक्षमा नेपालको पहुँच स्थापित गरी नेपालको आफ्नै भू–उग्रहमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने कार्यनीतिअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय अन्तरिक्ष नीति २०७६’ तयार गर्ने भएको छ । विकट क्षेत्रमा भरपर्दाे दुरसञ्चार सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक लाभबाट दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न, अन्तरिक्ष विज्ञसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जनशक्ति विकास र हुनसक्ने लाभ प्राप्त गर्न सरकारले उक्त नीति ल्याउन लागेको हो..
काठमाडौँ, ११ भदौ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले विभिन्न विधेयक ल्याएर स्वतन्त्र प्रेस र मानवाधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन र अन्तरराष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनमा उहाँले स्वतन्त्र प्रेस र मानवाधिकारमाथि अङ्कुश लागे नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने बताउनुभयो । सभापति देउवाले आफ्नो पार्टी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थापना भएको..
काठमाडौँ, ११ भदौ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर राख्न सुरु गरेको छ । ग्राहकको घर घर गएर विद्युत मिटर हेर्ने कामलाई हटाउने तयारी स्वरुप परिक्षणका रुपमा ८ हजार ४ सय स्मार्ट मिटर जडान गर्ने योजना अनुरुप प्राधिकरणले ठूला ग्राहकहरु अर्थात् औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ८ हजार स्मार्ट मिटर जडान गरी सकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । ३ फेजको विद्युत लाइन भएका ७०..
काठमाडौँ, ११ भदौ प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो नजिकका साथीहरुसँग अधिक जानकारी शेयर गर्न सक्ने गरि फेसबुकले एउटा नयाँ मेसेजिङ एपको निर्माणमा काम गरिरहेको छ । इन्स्टाग्रामको सिस्टम एपको रुपमा यो मेसेजिङ एपलाई फेसबुकले पेश गर्ने द भर्जमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । थ्रेड एपलाई यस्तो प्रकारले डिजाइन गरिएकेा छ कि जसमा इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताले आफ्ना क्लोज फ्रेण्ड लिस्टमा भएका मानिसहरुसँग आफ्नो लोकेसन, स्पीड तथा ब्याट्री..
काठमाडौं, १० भदाै । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुलाई निकै सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको छ । दैनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी कम्पनीले ‘प्रतिदिन एक जिबी डाटा’ प्याकेज योजना अन्तर्गत सस्तो दरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको हो । कुनै अत्यावश्यक काम पर्यो वा कतै कुरेर बस्नुपर्दा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुपर्यो भने तत्काल यो सुविधा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि कम्पनीले..
काठमाडौँ, १० भदौ गुगलले गत वर्ष ल्याएको विशेष खालको गोपनियता फिचरको सहायाले प्रयोगकर्ताले जिमेलमा यस्तो मेसेज पठाउन सक्दछन् जुन प्रापकले पढेसँगै निष्कृय हुन्छन् र त्यसलाई प्रापकले कपी, फरवार्ड तथा डाउनलोड गर्न सक्दैन । यो फिचर फेरि एकपटक चर्चामा छ, किनकी बिजनेसका लागि जिमेललाई प्रयोग गर्ने जि सुइट प्रयोगकर्ताले पनि अब यो फिचर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । गोप्य तथा संवेदनशील कागजातहरु शेयर गर्ने..
काठमाडौं, ९ भदौ। नापी विभागले विकास निर्माणका आयोजना निर्माण गर्नुपूर्व अति आवश्यक पर्ने स्याटलाइट इमेज लिन थालेको छ। नापीले समग्र नेपालको स्याटलाइट इमेज लिन थालेको हो। विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि अद्यावधिक स्याटलाइट इमेज आवश्यक पर्छ। चीन सरकारको सहयोगमा यस्तो इमेज लिने व्यवस्था मिलाइएको हो। गत वर्षदेखि चीन सरकारको सहयोगमा इमेज उपलब्ध गराउन थालिएको हो। चीनले पाँच वर्षसम्म निःशुल्क रूपमा..
चिप्लेढुङ्गा, ८ भदौ साइबर अपराधको मुद्दा खेपिरहेका पत्रकार अर्जुन गिरीले अदालतबाट सफाइ पाउनुभएको छ । जग्गा कारोवारमा कास्कीको पोखराका व्यवसायीबाट ठगिएका दुई जनाको पीडालाई समेटेर समाचार बनाएपछि गिरीले व्यवसायीको मुद्दा खेप्दै आएका थिए । चार महिनापछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सो मुद्दाको छिनोफानो गरेको हो । न्यायाधीश विनोदकुमार पोखरेलको एकल इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको हो । गिरीका विरुद्ध विपिन बतासले साइबर अपराध सम्बन्धी..
बलेवा, ८ भदौ अज्ञात समूहले नवनिर्मित भवनमा शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाले क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सिसीटिभी) जडान गरेको छ । घटनाको विषयमा सुरक्षा संयन्त्रलाई जानकारी गराएलगत्तै महासङ्घले आक्रमणकारीको पहिचानका लागि सिसीटिभी जडान गरेको हो । भवनमा अज्ञात समूहले गरेको तोडफोड घटनाको तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिइएको र आन्तरिकरूपमा आक्रमणकारी पहिचानका लागि सिसी क्यामेरा जडान गरिएको..
काठमाडाैं, ७ भदाै । अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले एक महिला अन्तरिक्षयात्रीले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पूर्वपतिको ब्याङ्क खाता अनधिकृत रूपमा चलाएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। त्यो आरोप प्रमाणित भएमा एन म्याकक्लेन अन्तरिक्षबाट अपराध गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछिन्। म्याकक्लेनले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पूर्वपतिको ब्याङ्क खाता हेरेको तर कुनै गलत नगरेको बताएको न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। उनसँग छुट्टिएका पति समर वोर्डेनले फेडेरल ट्रेड कमिशनमा यस सम्बन्धमा उजुरी..
काठमाडौँ, ६ भदौ । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि बाराको सिमराका सागर मैनालीले हातमा खुकुरी बोकेर प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेतालाई सिध्याउने भन्दै भिडियो फेसबुकमा हाले । उनले प्रयोग गरेका शब्द सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गर्न लायक छैन । उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियाबाट भर्खरै फर्किएर पुनः विदेश जाने तयारीमा थिए । महानगरीय अपराध महाशाखाका..
काठमाडौँ, ६ भदौ । गुगलले आफ्नो प्लेस्टोरबाट ८५ वटा एप्स हटाइ दिएको छ । ट्रेड माइक्रोमा सुरक्षामा अनुसन्धान कर्ताहरुले हटाइएका ती एप्सहरुभित्र विशेष प्रकारको दु:खदायी एडवेय लुकाएर राखिएको भन्दै गुगलले प्लेस्टोरबाट हटाइ दिएको हो । ट्रेड माइक्रोमा मोबाइल थ्रेट रेस्पोन्स इन्जिनियर इकोल्‍यूलर जू ले एउटा ब्लग पोस्टमा लेखेका छन्,’ गुगल प्ले स्टोरमा एडवेयरको सम्भावित रियल लाइफ इफेक्टको नमूना भेटिएको छ । यसले पछि..
भद्रपुर, ४ झापा । अब झापा कारागारमा भिडियो कनफ्रेन्सबाटै कैदीहरूकाे बयान लिइने भएकाे छ ।कैदीबन्दीमाथि हुने सुरक्षा चुनौती र आर्थिक भारलाई कम गर्न उद्देश्यले झापा कारागारमै भिडियो कनफ्रेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हाे। कारागार व्यवस्था विभागले झापा कारागारमा भिडियो कनफ्रेन्स जडानका लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेपश्चात् सो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको कारागारका जेलर राजेन्द्र निरौलाले बताए। कारागारमै एउटा छुट्टै कोठामा जडान गरिएको भिडियो कनफ्रेन्स..
सुमार्गीको टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज, ७९ करोड फ्रिक्‍वेन्सी दस्तुर तिर्न बाँकी
काठमाडाैं, ३ भदाै । व्यवसायी अजयराज सुमार्गीकाे टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएकाे छ । मुलुकको दूरसञ्‍चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले सुमार्गी सञ्‍चालक रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमतिपत्र 'लाइसेन्स' खारेज गरेको हाे। तोकिएको म्यादभित्र फ्रिक्‍वेन्सी दस्तुरवापत ७९ करोड रुपैयाँ चुक्ता नगरेपछि प्राधिकरणको हिजो आइतबार बसेको सञ्‍चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्याे। ‘पछिल्लो तीन महिनाको म्याद दिएर बक्यौता फ्रिक्‍वेन्सी दस्तुर..
काठमाडौँ, २ भदौ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी हेलो नेपालको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । हेलो नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाएपछि खारेज गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । “हामीले भदौ १ गतेसम्म प्राधिकरणलाई पहिलो किस्तामा रु सात करोड बक्यौता रकम बुझाउन भनेको थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर उक्त अवधिमा हेलो नेपालले पहिलो किस्ताको रकम नबुझाएपछि अनुमति पत्र..
बुटवल, २ भदौ प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका मुख्य राजमार्ग क्षेत्र तथा जिल्लाका सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी नियन्त्रण कक्षबाट नियन्त्रण गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । प्रदेश सरकारले सिसिटिभीको नियन्त्रण कार्यको प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मुख्य राजमार्ग क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटनालगायत आपराधिक गतिविधिको जुनसुकै बेला पनि निगरानी राख्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहयोगमा..
काठमाडाैं, २ भदाै । गत हप्ता चिनिया कम्पनी हुवावेले आफ्नै स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरी प्रविधि क्षेत्रमा हलचल मच्चाएकाे थियो । हुवावेको यस अपरेटिङ सिस्टमले गुगलको एन्ड्रोइडलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ । आवश्यक परेको बेला हुवावे जुनसुकै बेला एन्ड्रोइडबाट आफ्नै अपरेटिङ सिस्टममा सिफ्ट गर्न सक्दछ । अपरेटिङ सिस्टममार्फत् गुगललाई चुनौती पेश गरेको हुवावे यत्तिमा रोकिनेवाला छैन । अब गुगल म्याप्सलाई टक्कर दिनका लागि उसले..
अब ट्वीटरले अश्लिल म्यासेज-फाेटाे-भिडियाे आफैं हटाउने
काठमाडाैं, १ भदाै । अब ट्वीटरले इन-बक्सका असान्दर्भिक म्यासेजहरू आफैं हटाउने भएकाे छ । माइक्रो ब्लगिङ प्लेटफर्म ट्वीटरले यस प्रकारकाे आफ्नो नयाँ फिचर परीक्षण गरिरहेको छ। यस फिचर डाइरेक्ट म्यासेजसँग सम्बन्धीत छ। यस फिचरको नाम फिल्टर भएको ट्वीटर सपोर्टले जनाएको छ। ट्वीटरका अनुसार नयाँ फिचरले इनबक्सका असान्दर्भिक म्यासेजलाई फिल्टर गरेर आफैं हटाउने छ। यसमा अश्लिल शब्द, अश्लिल साइटका लिंकहरु, अश्लिल चित्र, भिडियो तथा जासुसीजन्य लिंकहरु..
भदौ १४ भित्र ग्रह र ताराको नेपाली नाम प्रस्ताव गर्न आहवान
काठमाडौँ, ३२ साउन । ग्रह र ताराको नेपाली राख्न पाइने भएको छ । अन्तरिक्षमा रहेको एउटा ग्रह ‘एचडी १००७७७बी’ र तारा ‘एचडी १००७७७’ को नेपाली नाम प्रस्ताव गर्न आहवान गरिएको छ । अन्तरिक्षीय पिण्डको नामकरण गर्ने इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियन (आईएयू) ले १०० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाललाई ग्रह र ताराको नाम रोज्न दिएको हो । प्रस्तावित नाम भदौ १४ गतेभित्र नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीमा अनलाइन..
काठमाडौँ, ३१ साउन हुवावेले गत हप्ता आफ्नै स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरेको थियो । हुवावेको यस अपरेटिङ सिस्टमले गुगलको एन्ड्रोइडलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ । आवश्यक परेको बेला हुवावे जुनसुकै बेला एन्ड्रोइडबाट आफ्नै अपरेटिङ सिस्टममा सिफ्ट गर्न सक्दछ । अपरेटिङ सिस्टममार्फत् गुगललाई चुनौती पेश गरेको हुवावे यत्तिमा रोकिनेवाला छैन । अब गुगल म्याप्सलाई टक्कर दिनका लागि उसले आफ्नो नेभिगेसन सिस्टम तथा..
सावधान ! प्रयोगकर्तालाई थाहा नदिइ फेसबुकले सुन्छ तपाईंकाे गाेप्य अडियो च्याट
एजेन्सी। फेसबुकले प्रयाेगकर्रताले म्यासेन्जरमा गर्ने अडियो च्याट सुन्ने गरेको खुलासा भएकाे छ । प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिइ म्यासेन्जरमा गरिने अडियो च्याट सुन्ने गरेको खुलासा गरेको हाे। यो खबर बाहिर आउनु अगाडि प्रयोगकर्ताहरु व्यक्तिगत च्याटमा आफूले गोप्य रुपमा बोलेका कुरा केबल मेसिन वा कसैले पनि सुन्न नसक्नेमा विश्वस्त थिए । तर फेसबुकले आफ्नो रेकर्डिङ फिचरको जाँच गर्नका लागि विभिन्न कन्ट्राक्टरहरुलाई प्रयोगकर्ताका अडियो च्याट सुन्न दिने गरेको..
कस्मिर विवादबारे बाेल्दा राखी सावन्तकाे ट्विटर अकाउन्ट नै बन्द
नयाँ दिल्ली, २९ साउन । जम्मू–कस्मिर विवादबारे मुख खाेल्दा बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्त ट्विटर अकाउन्ट नै बन्द भउकाे छ । उनले जम्मू–कस्मिरबारे भारत सरकारले उठाएको कदम सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिँदै बनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएर चर्चा पाएसँगै उनको ट्विटर अकाउन्ट बन्द भएको हाे । बलिउड अभिनेत्री राखी सावन्तले संविधानको धारा ३७० को खारेजको सन्दर्भमा दिएको यस अभिव्यक्तीले सामाजिक संजालमा चर्चा पाएको..
गलेश्वर, २९ साउन । भौतिक विज्ञानमा स्थापित विभिन्न मान्यताहरुको अपूर्णताका विषयमा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान गर्दै आएका युवा वैज्ञानिक भविन्द्र कुँवरले हालै विज्ञानको अर्को जटिल समस्याको समाधान गरेका छन् । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं २ ज्यामरुककोटमा जन्मेका कुँवरले दुर्यान्तर, प्रदुर्यान्तर र सुव्रत समीकरणको प्रयोगबाट पिण्डको चालमा हुने सबैखाले उतारचढावको सही मापन गर्न सकिने सुव्रत समीकरण पहिल्याएका हुन् । काठमाडौँ रिसर्च एण्ड पब्लिकेसन्समा..
सर्भर डाउन हुँदा भक्तपुर मालपोत कार्यालय ठप्प
भक्तपुर, २८ साउन जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सर्भर डाउन हुँदा दुई दिनदेखि काम ठप्प भएको छ । मालपोतमा सर्भरबाहेक अन्य कर्मचारीसमेत नहुँदा सेवाग्राहीले निकै सास्ती खेप्नु परेको समाचार सङ्कलन गर्न गएका सञ्चारकर्मीसमेतलाई कर्मचारीले दुव्र्यवहार गरेका छन् । रफत सञ्चार क्लबका अध्यक्ष सुशीलबन्धु थापासहित पत्रकारहरु रामगोपाल तमखु, सुन्दर शिल्पकार र मोहन बल्लमाथि दुव्र्यवहार गरिएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश अधिकारीसँग स्वीकृति लिएर..
काठमाडौँ, २७ साउन नेपाल टेलिकमले हाल विश्वभरका ८७ मुलुकमा जाँदा रोमिङ सेवा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराएको छ । टेलिकमले ती देशका १९२ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी सो सेवा उपलब्ध गराएको हो । तीमध्ये हालै ५३ मुलुकका ९९ सेवा प्रदायकसँगको रोमिङ सेवा शुल्कमा एकैचोटी भारी छुट प्रदान गरिएको प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीका जीएसएम मोबाइल ग्राहकका लागि उपलब्ध..
मिडियामा समान सहभागिता माग
काठमाडौँ, २७ साउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सरकार आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेशीलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंङ्घ (फोनिज) को २०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारको मूलधार नै समावेशीता र सहभागितामूलक शासन प्रणाली भएकाले ती समुदायका निम्ति सरकार कटिबद्ध रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो..
हिरोसिमामा खसेको बम भन्दा ३० गुणा बढी असर पार्ने पिण्डबाट जोगियो पृथ्वी !
वाशिङटन, २७ साउन । आईफल टावर भन्दा पनि ठूलो एउटा क्षुद्रग्रह अर्थात् आकाशीय पिण्ड पृथ्वी नजिकैबाट गएको छ । पृथ्वीको नजिकैबाट गुज्रिएको एउटा आकाशीय पिण्ड पृथ्वीसँग ठोक्किनबाट जोगिएको छ । सो पिण्ड ठोक्किएको भए पृथ्वीमा ठूलो क्षति हुन सक्ने अवस्था भएपनि पृथ्वी त्यसबाट जोगिएको छ । सो पिण्ड ठोक्किएको भए जापानको हिरोसिमामा खसेको बम भन्दा ३० गुणा बढी असर गर्न सक्ने अनुमान..
काठमाडाैं, २७ साउन । फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्रामले भारतको चेन्नईका एकजना ह्याकरलाई पुरस्कृत गरेको छ । लक्ष्मण मुथिया नामका ती ह्याकरलाई इन्स्टाग्रामले ३० हजार डलर नगर पुरस्कार दिएको हो। पेसाले सफ्टवेयर इन्जिनियर रहेका लक्ष्मण श्वेत टोपीधारी ह्याकर हुन् । उनले हालै इन्स्टाग्राम अकाउन्ट ह्याक गरे र त्यसबापत ३० हजार डलर पुरस्कार पाए । तर, उनले यसरी ह्याकिङबापत पुरस्कार पाएको यो पहिलोपटक होइन । उनले यसअघि..
एप्पल आइफोन असुरक्षित बन्दै, दुई मिनेटमै ह्याक हुन सक्छ फेसआइडी
काठमाडौं, २७ साउन । एप्पलको आइफोनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण फिचर फेस आइडी सबैभन्दा असुरक्षित बन्दै गएको छ । एक रिसर्चका अनुसार एप्पल डिभाइसको यस फेस आइडी फिचरमा एउटा त्यस्तो ‘बग’ छ जसका कारण एप्पलको फेस आइडी कालो टेप र चश्माको मद्धतले अनलक गर्न सकिन्छ । चीनको रिसर्च कम्पनी टेनसेन्टका अनुसन्धानकर्ताहरुले ब्याक ह्याट सेक्युरिटी कन्फ्रेन्सका समयमा एप्पलको फेस आइडी फिचरमा रहेको बगको लाइभ देखाइएको थियो..
Results 781: You are at page7of 27